Enfuvirtide ကိုအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ ဆေးညွန်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်သတိပေးချက်များတွင်အသုံးပြုသည်
Enfuvirtide ကို HIV၊ သောက်သုံးသော၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်သတိပေးချက်များတွင်အသုံးပြုသည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2019
1. Enfuvirtide ဆိုတာဘာလဲ။
၂။ Enfuvirtide လုပ်ဆောင်မှုယန္တရား?
3. Enfuvirtide ကိုအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီတွင်အသုံးပြုခြင်း
၄။ enfuvirtide အမှုန့်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
5. Enfuvirtide သောက်သုံးသော?
၆။ enfuvirtide ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကားအဘယ်နည်း။
၇။ enfuvirtide အမှုန့်ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်ထားသင့်သလဲ။
၈။ Enfuvirtide အမှုန့်နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနနှင့်အသုံးချမှုပိုမို
Enfuvirtide (159519-65-0) သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ရောဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည့်သင်၏ကျန်းမာသောဆဲလ်များကူးစက်ခြင်းမှလူ့ immunodeficiency virus (HIV) ကိုတားဆီးရန်ဆေးပညာလောကတွင်အသုံးပြုသော peptide အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Enfuvirtide သို့မဟုတ် T-20 ကိုကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးတွင် Fuzeon အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ရောင်းချသည်။ သို့သော်လည်း၊ သင်သည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်နှင့်အမျှ enfuvirtide ကိုမတူညီသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်ရောင်းချနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။
Enfuvirtide အမှုန့် (159519-65-0) အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကိုကုသရန်အတွက်အခြားဆေးများနှင့်အတူတကွအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဝယ်ယူထားသော immunodeficiency syndrome (AIDS) အတွက်တာဝန်ရှိသည့်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်။ Enfuvirtide သည်အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကိုမကုသသော်လည်း၎င်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏သက်ရောက်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျော့ချရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်ကိုလည်းသင်သတိပြုသင့်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုယူတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဆဲလ်တွေကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကနေကာကွယ်ပေးလို့ကောင်းတဲ့ကျန်းမာတဲ့ဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ လေ့လာမှုများအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဆဲလ်ဖြူများကိုကူးစက်စေသည့်ရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါလူနာများသည်ကိုယ်ခံအားစနစ်နိမ့်ကျနေသည်။ သို့သော် Enfuvirtide သည်သင်၏ကျန်းမာသောဆဲလ်များကိုမည်သည့်ပျက်စီးမှုမှမဆိုကာကွယ်ပေးပြီးသင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုတိုးတက်စေသည်။
Enfuvirtide acetate သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိအိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးပမာဏကိုလျော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီလူနာများကိုအများအားဖြင့်တိုက်ခိုက်သောကူးစက်မှုများကဲ့သို့အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးပြန့်ပွားမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချရန်သင့်အားကူညီသည် သင်သည်အခြား HIV / AIDS ဆေးများကိုသောက်သုံးသည်နှင့်အမျှ Enfuvirtide နှင့်အတူလိုက်နာရန်မှာအမြဲတမ်းကောင်းပါသည်၊
Enfuvirtide ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများတွင်ရရှိနိုင်ပေမယ့်ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းအောက်တွင်ရောင်းချသင့်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤထုတ်ကုန်ကိုစတင်မသုံးစွဲမီသင်ဆေးစစ်ရန်သွားစစ်ဆေးပါ၊ သင့်ဆရာဝန်ထံမှမှန်ကန်သောသောက်သုံးသောဆေးကိုသောက်ပါ။ Enfuvirtide acetate ကိုအွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးခန်း၏သက်တောင့်သက်သာဖြင့်သင်မှာယူနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ သင့်မှာယူမှုမပြုမီထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအားနားလည်ရန်သင့်လျော်သောသုတေသနပြုပါ။ enfuvirtide စျေးနှုန်းသည်ရောင်းသူပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ စျေးကွက်တွင်သင်၏အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သောအတုဆေးဝါးပစ္စည်းများအများအပြားရှိသည်။ မည်သည့်နေရာတွင်သောက်ရမည်ကိုသင်သေချာမသိပါကနောက်ထပ်အကူအညီအတွက်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
2. Enfuvirtide လုပ်ဆောင်မှုယန္တရား?
အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Enfuvirtide ဆေးထိုး ၎င်းသည်လူ့ immunodeficiency virus (HIV) ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်သည်မိမိဘာသာကြီးထွားခြင်းသို့မဟုတ်ပုံတူပွားခြင်းများမပြုလုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုရန်ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များကိုတိုက်ခိုက်သည် HIV သည်အများအားဖြင့်သင်၏ခုခံအားစနစ်ဆဲလ်များကို CD4 T-helper lymphocytes (သို့မဟုတ်) သွေးဖြူဥများဟုလူသိများသည်။ ဆဲလ်များသည်သင်၏မည်သည့်ကူးစက်မှုကိုမဆိုတိုက်ခိုက်ပြီးသင်၏ခန္ဓာကိုယ်စနစ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ပုံတူပွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီသည် CD4 T-helper ဆဲလ်များကိုသေစေပြီးရလဒ်အနေဖြင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်အားနည်းလာပြီးနောက်ဆက်တွဲရောဂါများကိုမဖြေရှင်းနိုင်တော့ပေ။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမတိုက်ဖျက်နိုင်သောကြောင့်သင်နှင့်ထိတွေ့ရမည့်ရောဂါအများစုသည်သင့်အားကူးစက်လိမ့်မည်။
Enfuvirtide လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားကသင်၏ CD4 ဆဲလ်များကိုအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကျူးကျော်မှုမှကာကွယ်ပေးသည်။ ဒီထုတ်ကုန်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပရိုတိန်းနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းသည် CD4 ဆဲလ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကူညီသည်။ enfuvirtide သည်ဤပရိုတိန်းများနှင့်ကပ်ပါကသင်၏ CD4 ဆဲလ်အမြှေးပါးနှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးမကူးစက်အောင်တားဆီးပေးသည်။ သတိပြုရမည်မှာ၊ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီသည်သင်၏စီဒီ (၄) ဆဲလ်ထဲသို့မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများရောက်ရှိလာမှသာကူးစက်နိုင်ပြီးတိုးပွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် enfuvirtide သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများပွားများ။ မပွားများစေရန်လည်းအာမခံသည်။
ဤ လုပ်ဆောင်ချက်၏ Enfuvirtide ယန္တရား စျေးကွက်ရှိအခြားအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကာကွယ်ဆေးဆေးများနှင့်ကွာခြားသည်၊ ၄ င်းသည်သင်၏ CD4 ဆဲလ်များကူးစက်ပြီးနောက်သာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Enfuvirtide HIV သည်အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးကိုတိုက်ဖျက်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားဆေးဝါးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိလာသောအခါဗိုင်းရပ်စ်ကြီးထွားမှုကိုတိုက်ထုတ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်၊ Enfuvirtide ကိုသင်တစ်ယောက်တည်းယူနိုင်ပြီးသင်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သင်လိုချင်သောရလဒ်များကိုရရှိလိမ့်မည်။ ယနေ့အထိ HIV ရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ၊ သို့သော် enfuvirtide ဖြင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဗိုင်းရပ်စ်ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးအိပ်ချ်အိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ရောဂါမဆိုတိုးတက်မှုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများကသင် enfuvirtide အမှုန့်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သည့်အခြားအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီဆေးဝါးများနှင့်အတူသောက်ရန်အကြံပြုသည်။ ထည့်ခြင်း peptide အမှုန့် အထူးသဖြင့်ရောဂါကူးစက်မှုသည်ဆေးဝါးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိလာပါကကုသမှုကိုခံယူခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဆေးကို HIV-anti-anti-medications ဆေးတွေထဲမှာအများဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားပြီးတိုးတက်မှုမခံစားရဘဲအခြားဆေးဝါးများသောက်သုံးနေသူလူနာများအတွက်အထူးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အခြားအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီဆေးဝါးများကိုသည်းမခံသောလူများကိုလည်းအကြံပြုနိုင်သည်။
Fuzeon သည် enfuvirtide အမှုန့်ကိုတက်ကြွသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအိပ်ချ်အိုင်ဗွီကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဆေးညွှန်းဖြစ်သည်။ Fuzeon သည် Fusion inhibitor ဟုလူသိများသောဆေးဝါးအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤအုပ်စုရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒြပ်ပေါင်းများသည် Fuzeon ကဲ့သို့သောအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို CD4 ဆဲလ်များနှင့် ပေါင်း၍ မတားဆီးဘဲနောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့ကိုပုံတူပွားခြင်းနှင့်တိုးပွားခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များအတွက် peptide အမှုန့်ကိုအခြားအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီဆေးဝါးများနှင့်အတူတကွအသုံးပြုသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း enfuvirtide သည်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကို CD4 နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လွယ်ကူသောပရိုတင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ဒီလုပ်ဆောင်မှုကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုသွေးဖြူဥများထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးသင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် enfuvirtide acetate သည်အခြားဆေးဝါးများသောက်သုံးသူများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဗိုင်းရပ်စ်သည်အခြားသတ်မှတ်ထားသောဆေးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒီဆေးကိုဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုသောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်အချက်အလက်အတွက်သင့်ဆရာ ၀ န်ကိုပြောပါ။
4. enfuvirtide အမှုန့်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
ဤဆေးကိုသင်စတင်မသောက်မီ၊ ဗူးအတွင်းရှိလက်ကမ်းစာစောင်တွင် enfuvirtide ထုတ်လုပ်သူ၏အသုံးပြုမှုညွှန်ကြားချက်များကိုသင်သေချာဖတ်ပါ။ လမ်းညွှန်ချက်များသည်ကုန်ပစ္စည်းအားမည်သို့စီမံအုပ်ချုပ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ အချို့ Enfuvirtide ပေးသွင်းသူများ enfuvirtide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုပင်သင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အဘယ်အချိန်တွင်ဆက်သွယ်သင့်ကြောင်းသင်သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကိုယူသောအခါသင်လုံခြုံမှုရှိရန် enfuvirtide သတိပေးချက်များဖြင့်သင့်အားသူတို့ကသင့်အားကမ်းလှမ်းသည်။
နှုတ်ဖြင့်သောက်သည့်အခြားအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီဆေးဝါးများနှင့်မတူဘဲ Enfuvirtide သည်ဆေးထိုးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤ peptide အမှုန့်သည်ကြီးမားသောမော်လီကျူးများရှိပြီးနှုတ်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလိုချင်သောရလဒ်များကိုမအောင်မြင်လျှင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်စနစ်အတွင်း၌ကြေကွဲသွားနိုင်သည်။ peptide အမှုန့်အတွက်, သင်ပြင်ဆင်မှုကိုမှန်ကန်စွာရရန်သို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်အားသင့်အတွက်ပြုလုပ်ပေးပါစေ။ သို့သော် enfuvirtide ဆေးထိုးခြင်းမပြုမီသင်၏ဆရာဝန်က enfuvirtide အမှုန့်ကိုအရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြင့်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုသင်ကြားနိုင်သည်။
enfuvirtide အမှုန့်ကိုပြင်ဆင်သည့်အခါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုအားလုံးကိုသေချာစွာလိုက်နာပါ။ အမှုန့်ကိုမြုံနေသောရေနှင့်ရောနှောပြီးဆေးကိုမစီမံမီအဖြေသည်အပြည့်အဝရောနှောနေစေရန်သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
3ML ကြီးမားသောဆေးထိုးအပ်ကိုသုံးပြီးရေပိုက်ကို ၁ မီလီမီတာခန့်အထိပြန်ဆွဲယူပြီးလေကိုဖြုန်းတီးသောရေဖလားထဲသို့ဖြည်းညှင်းစွာထည့်ပါ။
ထိုပြွတ်ကိုမြုံနေသောရေနှင့်အတူ Fuzeon ဖလားထဲသို့ထည့်ပါ။
ထို့နောက်မြုံသောရေကိုထည့်ပြီး Fuzeon အမှုန့်ထဲသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းညှစ်ပါ။
ဖလားကိုမလှုပ်ပါနှင့်။ သို့သော်ပျော်သွားစေရန်အတွက် ၁၀ စက္ကန့်ခန့်ထိနှိပ်ရန်သင့်လက်ချောင်းထိပ်ကိုအသုံးပြုပါ။
၄ င်းသည်ပျော်သွားသည်နှင့် ၄၅ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်နိုင်သည်။
လုံးဝရောထွေးသောအခါ, အရောအနှောရောင်စုံဖြစ်သင့်သည်၊ မည်သည့်ပူဖောင်းမှမပါဘဲ၊ အကယ်၍ အဖျပ်ဖျပ်ကိုထည့်သွင်းပါကသင်ကိုယ်တိုင်မထိုးခင်ပျော်ဝင်ရန်အချိန်ပိုပေးပါ။ ဖြေရှင်းချက်အပြီးအပိုင်နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးတာနဲ့သင်ယခုသောက်သုံးသောစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်အမှုန်တစ်စုံတစ်ရာကိုတွေ့မြင်ပါကသို့မဟုတ်အဖြေမှာလုံးဝမရှင်းလင်းမီ၊
အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ပုံမှန်ဆေးပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် ၉၀ မီလီမီတာဖြစ်ပြီးတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သောက်သင့်သည်။ သင်၏ဆေးထိုးခြင်းကိုသင်၏လက်မောင်းသို့မဟုတ်ပေါင်၏အထက်ပိုင်းတွင်ထိုးသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထုတ်ကုန်ကိုကလေးအားပေးနေလျှင်၊ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်တော်သည့်သောက်သုံးသောပမာဏနှင့်ဆေးကိုမည်မျှကြာကြာသောက်ရမည်ကိုသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ ဆေးထိုးရန်နေရာများကိုလှည့်ရန်အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ သင် enfuvirtide မစတင်မှီအခြားမည်သည့်ရောဂါကုသမှုကိုမဆိုသောက်ပါကသင့်ဆရာဝန်အားလည်းအကြောင်းကြားပါ။
5. Enfuvirtide သောက်သုံးမှုလား
Enfuvirtide မည်သည့်အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်လူနာမှမဆို CD4 ဆဲလ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အားပုံတူပွားခြင်းများကိုတားဆီးသောကြောင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ယူသင့်သည်။ ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်မူဆေးညွှန်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ Enfuvirtide ပေါင်းစပ်မှုသည်အခြားအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီဆေးဝါးများကိုခုခံနိုင်သည့် HIV ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ထုတ်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီအတွက်အကြံပြုထားသည့် enfuvirtide အရွယ်ရောက်ပြီးသူမှာတစ်နေ့လျှင် ၉၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီးနှစ်ကြိမ် ခွဲ၍ ခွဲသင့်သည်။ သင့်အနေဖြင့် anterior ပေါင်၊ လက်မောင်းသို့မဟုတ်ဝမ်းဗိုက်ရှိသော်လည်းဆေးကိုသင်စီမံသင့်သည်။
ကလေးငယ်များသည်အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အကြားတစ်ကီလိုလျှင် ၂ မီလီဂရမ်နှင့်တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်သောက်သင့်သည်။ ဒီအသက်အရွယ် bracket ကအတွက်ကလေးများအများဆုံးသောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 6mg ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၇ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများအတွက်အကြံပြုထားသည့်ဆေးသည်တစ်နေ့လျှင် ၉၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ခွဲခြားသင့်သည်။
Enfuvirtide HIV ဆေးသောက်ရန်သင်မေ့သွားလျှင်ချက်ချင်းသောက်ပါ၊ သို့သော်နောက်တစ်ကြိမ်သောက်ရန်အချိန်နီးလာပါကဆေးကိုသင်ကျော်သွားနိုင်သည်။ လွဲချော်နေသူအတွက်ကုန်ကျရန်အပိုဆေးကိုမသုံးပါနှင့်။ ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဆေးညွှန်းလုံးဝမကုန်မှီသင်၏နောက်ဆေးညွှန်းကိုအချိန်မီရရန်သတိရပါ။
enfuvirtide acetate ကိုသောက်သောအခါသင်၏ဒူး၊ တံတောင်ဆစ်၊ ထို့အပြင်ဆေးညွှန်းကိုအမာရွတ်များ၊ မှဲ့များ၊ အနာများနှင့်အရေပြားမျက်နှာပြင်သို့မကျန်းမာစေပါ။ Enfuvirtide ကိုသောက်သုံးခြင်းကသင့်အားရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်လိင်ကိုအမြဲကာကွယ်ပေးပြီးချွန်ထက်သောအရာဝတ္ထုများနှင့်သင်၏သွားတိုက်တံကိုမျှဝေခြင်းကိုရှောင်ပါ။ အများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရရန်အတွက်သောက်သုံးရန်ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုလိုက်နာပါ။ ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်၊ သင့်အားအိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှုကိုတားဆီးရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်သင့်ကိုဆရာဝန်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
6. enfuvirtide ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
Enfuvirtide အိပ်ချ်အိုင်ဗွီသည်အခြားဆေးဝါးများနည်းတူသင့်ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်နှင့်ဆေးဝါးကမည်သို့တုံ့ပြန်မည်ဆိုသည့်အပေါ် မူတည်၍ သင့်အားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအမျိုးမျိုးကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ enfuvirtide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် enfuvirtide အသုံးပြုသူများအားလုံးနီးပါးဖြစ်လေ့ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ရှိသည်။ ညံ့သော enfuvirtide သိုလှောင်မှုသည်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဘုံအချို့ Enfuvirtide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပါဝင်သည်;
enfuvirtide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာလူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သဖြင့်မည်သည့်အရာကမျှပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပါနှင့်။ များသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမပျောက်ကွယ်သွားပါကသင့်ဆရာဝန်အားအကြောင်းကြားပါ။ ဤဆေးကိုသောက်သောအခါဘေးကင်းရန်သင့်ဆရာဝန်မှပေးသောသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်များအားလုံးလိုက်နာပါ။
7. enfuvirtide အမှုန့်ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်ထားသင့်သလဲ။
Enfuvirtide အမှုန့် (159519-65-0) ထုတ်လုပ်သူများကသင်ကုန်ပစ္စည်းကိုမည်သို့သိုလှောင်ထားသင့်ကြောင်းနှင့်မည်သို့စွန့်ပစ်ရမည်ကိုပင်အမြဲဖော်ပြသည်။ အကြံပြုထားသောရောနှောထားသော enfuvirtide သိုလှောင်မှုအမှုန့်သည်အပူချိန် ၂၀ မှ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ရှိသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်အခန်းအပူချိန်တွင်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါက၎င်းကို ၂ မှ ၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အေးခဲအောင်ထားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်မြုံနေသောရေကိုအခန်းအပူချိန်တွင်အမြဲသိုလှောင်ထားပါ။
သငျသညျ enfuvirtide ဖြေရှင်းချက်ရောထွေးသောအခါ2မှ 8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းထားပါ။ ရောစပ်ထားသော enfuvirtide ကို ၂၄ နာရီအတွင်းသောက်သင့်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းသက်တမ်းကုန်သွားပြီးနောက်တွင်၊ ပစ္စည်းကိရိယာတံဆိပ်ခတ်နေစဉ်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားသောအခါ၎င်းကိုမဝယ်ပါနှင့်။ enfuvirtide အမှုန့်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ကိရိယာနှင့်အသုံးမပြုသည့်ဆေးများကိုသင်မည်သို့စွန့်ပစ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ FDA လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။
8. Enfuvirtide အမှုန့်နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနနှင့်အသုံးချမှုများ
enfuvirtide အမှုန့်များကိုမတူညီသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများထံမှဝယ်ယူသောအခါအရည်အသွေးကောင်းသည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရရှိရန်သင့်အားကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိစေရန်သေချာစွာသုတေသနပြုပါ။ enfuvirtide အမှတ်တံဆိပ် Fuzeon သည်စျေးကွက်တွင်ထင်ရှားသောတံဆိပ်ဖြစ်သော်လည်းကုန်ပစ္စည်းကိုမတူညီသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်ရောင်းချနိုင်သည်။ စျေးကွက်တွင် enfuvirtide ပေးသွင်းသူများစွာရှိပြီးသင်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေသင့်သည်။ The Enfuvirtide စျေးနှုန်းများ ရောင်းချသူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင့်တော်သောရောင်းချသူကိုရွေးချယ်သောအခါ၎င်းကိုသိသာထင်ရှားသောအချက်အဖြစ်အသုံးမပြုပါနှင့်။
ယေဘူယျအားဖြင့်အခြား enfuvirtide အသုံးပြုမှုနှင့်ယင်း၏အသုံးချမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်နောက်ထပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်သုတေသနပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်ဆေးထိုးသည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများစွာသည်စိုးရိမ်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပြီးနောက်ထပ်လေ့လာမှုများက enfuvirtide ပါးစပ်သောက်သုံးမှုကိုဖွံ့ဖြိုးရန်ကူညီနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်တ္ထုကိုတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ထိုးရန်နောက်ထပ်တီထွင်နိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင် enfuvirtide သည်ထိုးဆေးနှင့်အစွမ်းထက်သော HIV ဆေးတိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။ enfuvirtide နှင့် gp41 အကြောင်းသင့်ဆရာ ၀ န်ကိုပြောပါ။
Zhu, X တို့မှာ, Zhu, Y. , ရဲ, အက်စ်, ဝမ်, ဆိုးကျိုး, Xu, ဒဗလျူ, Su, အက်စ်, ... & Zhang က, တီ (2015) ။ enfuvirtide ကျော် HIV Fusion inhibitor AP3 ၏ဆေးဝါးနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ - အတု peptide နည်းဗျူဟာ၏အားသာချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ သိပ္ပံနည်းကျအစီရင်ခံစာများ, 5, 13028 ။
Blanco, JL, & Martinez-Picado, ဂျေ (၂၀၁၂) ။ အေအာတီ - အတွေ့အကြုံရှိလူနာများတွင်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကူးစက်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိအခြေအနေ, 7(5), 415-421 ။
Chowdhury, အက်စ်, & ရွိုင်း, PK (2016) ။ HIV အတွက်ပေါင်းစပ်ကုထုံးအဖြစ် enfuvirtide နှင့် protease inhibitors ၏သင်္ချာပုံစံ။ Nonlinear သိပ္ပံ၏နိုင်ငံတကာဂျာနယ်နှင့်ကိန်းဂဏန်းခြင်း simulation, 17(6), 259-275 ။